Izindatshana zika-Ohad Samet Martech Zone |
Imibhalo nge U-Ohad Samet
U-Ohad Samet ungumsunguli kanye ne-CEO ye I-TrueAccord, ipulatifomu yokutholwa kwe-algorithm yokuqala. I-TrueAccord isebenzisa ukufunda ngomshini, i-analytics yokuziphatha nendlela yokusebenza yabantu ukusiza amabhizinisi namabhizinisi amancane ukuthi athole izinkokhelo ezivelele futhi agcine ubudlelwane obuhle bamakhasimende.
Ukuqoqwa Kwezikweletu Kwe-eCommerce Startups: Umhlahlandlela Ocacile
NgoMgqibelo, Januwari 19, 2019 NgoMgqibelo, Januwari 19, 2019 U-Ohad Samet
Ukulahleka okususelwa ekuthengisaneni kuyiqiniso lokuphila kwamabhizinisi amaningi, ngenxa yokubuyiselwa kwemali emuva, izikweletu ezingakhokhiwe, ukubuyiselwa emuva, noma imikhiqizo engabuyiswanga. Ngokungafani namabhizinisi abolekisa okufanele amukele amaphesenti amakhulu okulahleka njengengxenye yemodeli yawo yebhizinisi, ukuqala okuningi kuthatha ukulahleka kokuthengiselana njengenkinga engadingi ukunakwa okuningi. Lokhu kungaholela kuma-spikes ekulahlekelweni ngenxa yokuziphatha kwamakhasimende okungabhekiwe, kanye nokusalela emuva kokulahleka okungancishiswa kakhulu ngabambalwa